INgqungquthela yeZizwe eziManyeneyo yaseNew York yahlasela iiNkokeli zeHlabathi zibukele: "Musa ukukhetha ukupheliswa! Sisiphi isizathu sakho?"
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukhenketho lokuzonwabisa » INgqungquthela yeZizwe Ezimanyeneyo eNew York yahlasela iiNkokeli Zehlabathi zibukele: “Musa Ukukhetha Ukutshabalala! Sisiphi isizathu sakho?"
Ukhenketho lokuzonwabisa • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • News Sustainability • Tourism • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
INgqungquthela yeZizwe Ezimanyeneyo eNew York yahlasela iiNkokeli Zehlabathi zibukele: “Musa Ukukhetha Ukutshabalala! Sisiphi isizathu sakho?"
U-Aïssa Maïga urekhoda ilizwi ledayinaso yoopopayi yekhompyutha enefilim entsha emfutshane yeNkqubo yoPhuhliso ye-UN ethi Musa ukukhetha uKutshabalala umkhankaso wokwazisa abantu malunga nokutshintsha kwemozulu. Ifoto: Simon Guillemin
Ukugqobhozela kwiHolo yeNdibano yeZizwe eziManyeneyo, edume ngeentetho eziyimbali zeenkokeli zehlabathi, idayinaso ebalaseleyo ixelela abaphulaphuli abanozakuzaku kunye nezikhakhamela ezothukileyo nezididekileyo ukuba “lixesha lokuba abantu bayeke ukuzingxengxezela baqalise ukwenza iinguqulelo” ukuze balungise imeko. ingxaki yemozulu.
Ifilimu yokuqala ukwenziwa ngaphakathi kwiNdibano yeZizwe eziManyeneyo.
INkqubo yoPhuhliso yeZizwe eziManyeneyo (UNDP) izisa idayinaso ekhohlakeleyo, ethethayo kwikomkhulu leZizwe eziManyeneyo ukuze ikhuthaze iinkokeli zehlabathi ukuba zithathe amanyathelo angakumbi kwimozulu,
Kumboniso bhanyabhanya omfutshane osungulwe namhlanje njengeyona nto iphambili kwiphulo elitsha le-arhente elithi 'Musa Ukukhetha Ukutshabalala'.
“Ubuncinane besine<em>asteroid,” ilumkisa ngelitshoyo idayinaso, ibhekisela kwingcamango edumileyo echaza ukuphela kweedayinaso kwiminyaka ezigidi ezingama-70 eyadlulayo. “Sithini isizathu sakho?”
Lo mboniso bhanyabhanya wokuqala ukwenziwa ngaphakathi kwiNdibano yeZizwe eziManyeneyo kusetyenziswa imifanekiso eyenziwe ngekhompyutha (CGI) ibonisa abantu abadumileyo behlabathi bevakalisa idayinaso ngeelwimi ezininzi, kuquka nabadlali beqonga. UEiza González (Spanish), UNikolaj Coster-Waldau (Danish), kunye UAïssa Maïga (isiFrentshi).
Idayinaso iqhubeleka ngokuqaqambisa indlela inkxaso yezemali yamafutha efosili ngenkxaso-mali – imali yabarhafi enceda ukugcina ixabiso lamalahle, i-oyile negesi lisezantsi kubathengi – ayinangqiqo kwaye ayinangqiqo xa sijongana nemozulu eguqukayo.
Cinga ngazo zonke ezinye izinto onokuzenza ngaloo mali. Ehlabathini lonke abantu bangamahlwempu. Awucingi ukuba ukubanceda kuya kwenza ingqiqo ngaphezu… idayinaso ithi.
"'Ifilimu iyonwabisa kwaye iyabandakanya, kodwa imiba ethetha ngayo ayinakuba nzulu ngakumbi," utshilo u-Ulrika Modéer, iNtloko yeSebe le-UNDP kuBudlelwane baNgaphandle kunye neNkxaso. UNobhala-Jikelele weZizwe Ezimanyeneyo ubize ingxaki yemozulu 'njengendlela ebomvu eluntwini.' Sifuna ukuba ifilim yonwabise, kodwa sifuna ukwazisa ukuba imeko imbi kangakanani na. Umhlaba kufuneka uhambele phambili kwimozulu ukuba siza kuphumelela ekugcineni umhlaba wethu ukhuselekile kwizizukulwana ezizayo. ”
Iphulo le-UNDP elithi 'Musa Ukukhetha Ukutshabalala' kunye nomboniso bhanya-bhanya ujolise ekukhanyiseleni kwinkxaso-mali yamafutha eefosili kunye nendlela ezirhoxisa ngayo inkqubela-phambili ebalulekileyo ekupheliseni utshintsho lwemozulu kwaye ziqhuba ukungalingani ngokunceda abazizityebi.
Uphando lwe-UNDP olukhutshwe njengenxalenye yeli phulo lubonisa ukuba ihlabathi lichitha imali eyothusayo yeedola ezingama-423 ezigidi zeedola ngonyaka ukuxhasa ngamafutha efosili kubathengi – i-oyile, umbane oveliswa kukutshiswa kwamanye amafutha efosili, igesi, namalahle.
Oku kunokuhlawula iindleko zogonyo lwe-COVID-19 kumntu wonke emhlabeni, okanye kuhlawulelwe kathathu isixa sonyaka esifunekayo ukuphelisa intlupheko egqithisileyo yehlabathi.
Eli phulo kunye nomboniso bhanyabhanya banethemba lokwenza imiba ngamanye amaxesha entsonkothileyo kunye neyobugcisa enxulumene neFossil Fuel Subsidies kunye nemeko kaxakeka yemozulu ifikeleleke ngakumbi. Ngezenzo ezahlukeneyo uluntu olumenywa ukuba lizithathe, injongo kukufundisa nokuvakalisa ilizwi kubantu kwihlabathi liphela.
Ifilimu ethi 'Sukukhetha Ukutshabalala' yenziwa ngentsebenziswano no-Actista Los Angeles (i-arhente yokuyila ephumelele iimbasa ezininzi), uDavid Litt (umbhali wentetho kaMongameli waseMelika uBarack Obama) kunye neFramestore (isitudiyo soyilo emva kukaJames Bond, abaGcileli Galaxy, Avengers End Game). UWunderman Thompson wakha i-ecosystem yedijithali kwinyathelo lokuqala lokuxhobisa abantu kwihlabathi jikelele ukuba bathathe inyathelo ngelixa i-Mindpool ivelisa isixhobo sokuzibandakanya kubukrelekrele kwiqonga lephulo.
I-PVBLIC Foundation, intlangano entsha engenzi nzuzo ehlanganisa amajelo eendaba, idatha, kunye neteknoloji yophuhliso oluzinzileyo kunye neempembelelo zentlalo kwihlabathi jikelele, ibonelela ngonxibelelwano olucwangcisiweyo kunye nenkxaso yeendaba. Izincedisi ezizinzileyo uphawu lwe-BOTTLETOP kunye nentshukumo yabo ye-#TOGETHERBAND nabo basebenzisana ne-UNDP kwaye baza kuvelisa urhwebo olulodwa negcisa laseBrazil i-Speto ukuze kuxhamle iphulo.
Fumana ulwazi oluthe kratya malunga nephulo ku www.dontchooseextinction.com